သတင်းစုံ Archives - Page 104 of 106 - MM Live News
အန်စီအေ လက်မှတ်ထိုးရေးကိစ္စ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များနှင့် ကေအန်ပီပီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
June 14, 2018 June 14, 2018 MM Live News4 Comments on အန်စီအေ လက်မှတ်ထိုးရေးကိစ္စ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များနှင့် ကေအန်ပီပီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
အန်စီအေ လက်မှတ်ထိုးရေးကိစ္စ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များနှင့် ကေအန်ပီပီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(ကေအန်ပီပီ)နဲ့ အန်စီအေ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တချို့ ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပြီး အန်စီအေ လက်မှတ်ရေး ထိုးနိုင်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မယ့်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်၊ နမ့်ဆွယ်မှာ တွေ့ဆုံကြတာဖြစ်ပြီး အန်စီအေ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (ပီပီအက်စ်တီ) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က သွားရောက် တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ အန်စီအေ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို သွားရောက်ရှင်းပြတာလို့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ကေအန်ယူ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုကွယ်ထူးဝင်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ “ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ အန်စီအေရဲ့ ကျနော်တို့အခု ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အနေအထားကို ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေ၊ ထိုး မထိုးဘူးဆိုတာကတော့ […]
မိုးကုတ်တွင် မြေပြိုပြီး လူ ၅ ဦးသေဆုံးခဲ့သည့်အတွက် အိမ်ခြေ ၅ဝ ခန့်အား ပြောင်းရွှေ့ထား
June 14, 2018 June 14, 2018 MM Live NewsLeaveaComment on မိုးကုတ်တွင် မြေပြိုပြီး လူ ၅ ဦးသေဆုံးခဲ့သည့်အတွက် အိမ်ခြေ ၅ဝ ခန့်အား ပြောင်းရွှေ့ထား
မိုးကုတ်တွင် မြေပြိုပြီး လူ ၅ ဦးသေဆုံးခဲ့သည့်အတွက် အိမ်ခြေ ၅ဝ ခန့်အား ပြောင်းရွှေ့ထား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းရှိ အောင်သစ်လွင်ဘုန်းကြီးကျောင်း အနီး မြေပြိုမှုဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး လူ ၅ ဦးသေဆုံးခဲ့သည့်အတွက် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အိမ်ခြေ ၅ဝ ခန့်အား ပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်း မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောသောင်းတင်က မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ ကသဲအုပ်စု၊ အောင်သစ်လွင်ရပ်ကွက်မှာ ဇွန်လ ၁၄ ရက်၊ နံနက် ၂ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နေအိမ် ၃ လုံး မြေပြိုကျတဲ့အထဲ ပါသွားခဲ့ရာ နေအိမ်အတွင်း လူကြီး ၂ ဦး၊ ကလေးငယ် ၃ ဦး စုစုပေါင်း ၅ ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း […]
ဟဲ့ ကိုရင် စာအုပ်တွေလဲမပါဘူး ။ မှန့် မှန်ပါ့ ဆရာတော်ကြီးဘုရာ့ တ တပည့်တော် လျှောက်စရာရှိလို့ ပါဘုရား။
June 14, 2018 June 14, 2018 MM Live News3 Comments on ဟဲ့ ကိုရင် စာအုပ်တွေလဲမပါဘူး ။ မှန့် မှန်ပါ့ ဆရာတော်ကြီးဘုရာ့ တ တပည့်တော် လျှောက်စရာရှိလို့ ပါဘုရား။
ဟဲ့ ကိုရင် စာအုပ်တွေလဲမပါဘူး ။ မှန့် မှန်ပါ့ ဆရာတော်ကြီးဘုရာ့ တ တပည့်တော် လျှောက်စရာရှိလို့ ပါဘုရား။ လျှောက်စမ်းကွာ ဘာတုန်း။ တ တပည့်တော်လူထွက်မလို့ ပါဘုရား။ ဘာလို့ တုန်းကွ ကိုရင်လေးရ ဘာလဲ ငါ့ကျောင်းက ဆွမ်းမဝ လို့ လား ဟင် သင်္ကန်းမရှိလို့ လား စာမလိုက်နိုင်လို့ လား ဖြေပါဦး ကိုရင် ရ တပည်တော် အိမ်ထောင်ပြု ချင်လို့ ပါဘုရား ။ ကိုရင် ဟိုမှာ နှစ်ထပ်ကျောင်းကြီး မင်းမြင်လား မှန် မှန်ပါ့ မြင် မြင်ပါတယ်ဘုရား အေး အိမ်ထောင်ပြု လိုက်တဲ့ ဒုက္ခဟာ မြင်နေရတဲ့ကျောင်းလောက်ကြီး ကြီးမားပေမယ့် စိတ်သာယာမူကတော့ ကျောင်းကြီးရဲ့ တံခါးတစ်ဖက်ရဲ့ မှန်တစ်ချပ်စာလောက်ပဲ […]
ဟုမ္မလင်း စက်​​လှေ​မှောက်​ရာက​နေ မိဘ​တွေ လက်​ထဲက လွတ်​ထွက်​သွားတဲ့ ၁၉ ရက်​သား က​လေးငယ်​ထူးခြားကံ​ကောင်းစွာ အသက်​ရှင်
June 14, 2018 June 14, 2018 MM Live News12 Comments on ဟုမ္မလင်း စက်​​လှေ​မှောက်​ရာက​နေ မိဘ​တွေ လက်​ထဲက လွတ်​ထွက်​သွားတဲ့ ၁၉ ရက်​သား က​လေးငယ်​ထူးခြားကံ​ကောင်းစွာ အသက်​ရှင်
ဟုမ္မလင်း စက်​​လှေ​မှောက်​ရာက​နေ မိဘ​တွေ လက်​ထဲက လွတ်​ထွက်​သွားတဲ့ ၁၉ ရက်​သား က​လေးငယ်​ထူးခြားကံ​ကောင်းစွာ အသက်​ရှင် ဇွန် ၁၃ . ဒီနေ့ဟုမ္မလင်းမြို့ဆိပ်ကမ်းမှာ ကောယားလိုင်းစက်လှေ လေးလုံးထိုးသစ်သားခွံတစ်စင်းမှောက်ပြီးနှစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်ခရီးသည်ပေါင်း၂၅မှာတစ်ဦးအသက်ဆုံးရှူံးခဲ့ပါတယ် ￼￼အံသြစရာအဖြစ်အပျက်လေးကတော့ ဆယ့်ကိုးရက်သားကလေးလေးဟာ အဖေအမေလက်ထဲကနေလွတ်ထွက်ပြီးဝတ်ထားတဲ့ကိုယ်ပေါ်ကသေးခံလေးကျေးဇူးကြောင့် ဖလက်ခွံတွေအောက်မှလှိမ့်ထွက်ပြီးပေါလောလေးမျှောနေခဲ့တာကိုတွေ့မြင်သူများကကယ်ဆယ်ပေးခဲ့လို့ အသက်ချမ်းသာခဲ့ရှာပါတယ် . အဆုတ်ထဲရေအနည်းငယ်ဝင်သွားလို့ဆေးရုံမှာပြုစုစောင့်ရှောက်မူခံယူနေရှာပါတယ် အသက်ပြင်းတဲ့မောင်ကံကောင်းလေးကျမ်းမာပါစေ။ ￼Crd.Yin Nyein Thu& လမ်းပြကြယ်​ဖြူ Unicode ဟုမ်မလငျး စကျ​​လှေ​မှောကျ​ရာက​နေ မိဘ​တှေ လကျ​ထဲက လှတျ​ထှကျ​သှားတဲ့ ၁၉ ရကျ​သား က​လေးငယျ​ထူးခွားကံ​ကောငျးစှာ အသကျ​ရှငျ ဇှနျ ၁၃ . ဒီနဟေု့မ်မလငျးမွို့ဆိပျကမျးမှာ ကောယားလိုငျးစကျလှေ လေးလုံးထိုးသဈသားခှံတဈစငျးမှောကျပွီးနှဈမွုပျခဲ့ပါတယျခရီးသညျပေါငျး၂၅မှာတဈဦးအသကျဆုံးရှူံးခဲ့ပါတယျ . အံသွစရာအဖွဈအပကျြလေးကတော့ ဆယျ့ကိုးရကျသားကလေးလေးဟာ အဖအေမလေကျထဲကနလှေတျထှကျပွီးဝတျထားတဲ့ကိုယျပျေါကသေးခံလေးကြေးဇူးကွောငျ့ ဖလကျခှံတှအေောကျမှလှိမျ့ထှကျပွီးပေါလောလေးမြှောနခေဲ့တာကိုတှမွေ့ငျသူမြားကကယျဆယျပေးခဲ့လို့ အသကျခမျြးသာခဲ့ရှာပါတယျ . အဆုတျထဲရအေနညျးငယျဝငျသှားလို့ဆေးရုံမှာပွုစုစောငျ့ရှောကျမူခံယူနရှောပါတယျ အသကျပွငျးတဲ့မောငျကံကောငျးလေးကမျြးမာပါစေ။ Crd.Yin Nyein Thu& […]
သင်မသိသေးတဲ့ ဆီးချိုကို ယူပစ်လိုက်သလို ပျောက်သွားစေမယ့် အရွက်
June 13, 2018 June 13, 2018 MM Live News4 Comments on သင်မသိသေးတဲ့ ဆီးချိုကို ယူပစ်လိုက်သလို ပျောက်သွားစေမယ့် အရွက်
သင်မသိသေးတဲ့ ဆီးချိုကို ယူပစ်လိုက်သလို ပျောက်သွားစေမယ့် အရွက် ဆီးချို ရောဂါဟာ လက်ရှိမှာ လူကြီး၊ လူငယ် မရွေး ဖြစ်ပွား နေပြီး အထူးသဖြင့် အသက် အရွယ်ကြီးတဲ့ သူတွေမှာ ရောဂါရဲ့ အကျိုး သက်ရောက် မှုဟာ ဆိုးရွားလွန်း လှပါတယ်။ ဒီ့အတွက် သဘာဝ နည်းနဲ့ ကုနိုင်တာကတော့ သရက်ရွက်ပါ။ သရက်ရွက်မှာ vitamins, enzymes, antioxidants တွေ အများအပြား ပါဝင် တာကြောင့် သူ့ကို ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းစွာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့ သရက်ရွက်နုနုလေး ၁ဝရွက်ကနေ ၁၅ ရွက်အထိခူးပြီး ရေ တစ်ဖန်ခွက်စာ ပမာဏနဲ့ ပြုတ်ပါ။ ပြီးရင် ထိုအတိုင်း တစ်ညတာ ထားပါ။ […]
မသန်စွမ်းတဲ့ အမျိုးသမီးကို တဲထဲခေါ် စော်ကားပြီးမှ ဒီလိုလုပ်လို့ရပါသလား
June 13, 2018 June 13, 2018 MM Live NewsLeaveaComment on မသန်စွမ်းတဲ့ အမျိုးသမီးကို တဲထဲခေါ် စော်ကားပြီးမှ ဒီလိုလုပ်လို့ရပါသလား
မသန်စွမ်းတဲ့ အမျိုးသမီးကို တဲထဲခေါ် စော်ကားပြီးမှ ဒီလိုလုပ်လို့ရပါသလား ဒီလိုဘဲအနိုင်​ကျင့်​ခံရ​တော့မှာလား မွန်​ပြည်​နယ်​ ကျိက်​မ​ရောမြို့ အတ္ထရံမြိုသစ်​ရပ်​ကွက်​မှာ ၂၄၊၃၊၂၀၁၈ရက်​​နေ့ည ၇း၃၀နာရီ​လောက်​မှာ ဗွီဒီယ်ိုကြည့်​ပြီးအပြန်​မှာ ၄င်းရပ်​ကွက်​ အမှတ်​၊၅၅၊ကျန်​စစ်​သားလမ်း ​မေတ္တာကမဌာန်း​ကျောင်းအနီးမှာ​နေတဲ့ ဦးထွန်းမြင့်​+​ဒေါ်​အေး​မော်​တို့ရဲ့သမီး မ—-(၂၅) နှစ်​ (မသန်​စွမ်းအသိမှတ်​ပြု မှတ်​ပုံတင်​ကိုင်​​ဆောင်​ထားသူ)ကို တလမ်းတည်း​နေ ဦးသိန်း​ဆွေ+မ​အေးသန်း တို့ရဲ့ သား လွင်​မိုး(​ခေါ်)ဖိုးတုံးလုံး အသက်​(၁၉)နှစ်​က လူသူမရှိတဲ့ တဲတလုံးဆီဖျား​ယောင်း​သွေး​ဆောင်​​ခေါ်ယူသွား ပြီး တဲရဲ့​ရှေ့ကပြင်​​လေးမှာ မုဒိန်းတခါကျင့်​လိုက်တယ်​ အချိန်​တန်​လို့ မ——–အိမ်​ပြန်​မ​ရောက်​လို့ အ​မေဖြစ်​သူ​ဒေါ်​အေး​မော်​ကလိုက်​ရှာ​တော့ မ—–ကို အဲဒီတဲမှာ ထိုင်​ငို ​နေတာကို​တွေ့ပြီး အကျိုးအ​ကြောင်း​မေး​တော့ သူ့ကို လွင်​မိုး (ခ)​ပိုးတုံးလုံးက သူမကိုတဲသို့ဖျား​ယောင်း ​ သွေး​ဆောင်​​ခေါ်ယူလာပြီး သူမအလိုမတိုဘဲ မုဒိန်းတခါကျင့်​ခဲ့​ကြောင်း ပြီးသူမကို ထားခဲ့ပြီး ထွက်​သွား ​ကြောင်း ငိုယိုပြီး အ​မေကို​ပြောပြခဲ့ပါတယ်​။ ​ဒေါ်​အေး​မော်​ကသမီးဖြစ်​သူကို အိမ်​ပြန်​​ခေါ်လာပြီး […]
June 13, 2018 June 13, 2018 MM Live News4 Comments on ဒုက္ခပါဘဲဗျာ။အကြံပေးကြပါအုန်း။ ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်|ရပ်ကွက်ကြီး(၁၀)ကရွှေယမုံဖုန်းအရောင်းဆိုင်မှာmytelဖုန်းဆင်းကတ်ကို
ဒုက္ခပါဘဲဗျာ။အကြံပေးကြပါအုန်း။ ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်|ရပ်ကွက်ကြီး(၁၀)ကရွှေယမုံဖုန်းအရောင်းဆိုင်မှာmytelဖုန်းဆင်းကတ်ကိုသွားဝယ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖုန်းဆင်းကတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိပြီးသုံးစွဲခွင့်ရရန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဆင်းကတ်အကြောင်းလေ့လာကြည့်တော့၉၆၉နံပါတ်နဲ့စထားတာဆိုဘဲ။၉၆၉ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါး|တရားဂုဏ်တော်(၆)ပါး|သံဃဂုဏ်တော်(၉)ပါးစတဲ့အင်မတန်ကျက်သရေမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပြီးဘာသာရေးအနှစ်သာရပြည့်ဝ၍အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့သင်္ချာဂဏန်းများဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးစုံစမ်းတော့ဒီmytelကိုဗီယက်နမ်စစ်တပ်က၄၉ရာခိုင်နုန်း|မြန်မာဦးပိုင်စစ်တပ်က၂၈ရာခိုင်နုန်း|ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားကုမ္ပဏီများက၂၃ရာခိုင်နုန်းဖြင့်အသီးသီးပိုင်ဆိုင်ကြတယ်လို့သိရတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာMPT|တယ်လီနော|အူရီဒူးစတဲ့စတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမျာရှိပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားများဟာယခင်ခေါတ်ကာလများကထက်အသိအမြင်ပွင့်လင်းလာပြီးဗဟုသုတများစွာတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ယခုတဖန်ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားကုမ္ပဏီများနှင့်မြန်မာစစ်တပ်မှစုစုပေါင်း၅၁ရာခိုင်နုန်းပိုင်ဆိုင်သောmytelပေါ်လာသောအခါတချိုပြည်သူများမှမသုံးစွဲကြရန်fbတွင်အကြီင်္းအကျယ်ရေးသားလာသည်ကိုတွေ့လာရပါတယ်။mytelသုံးစွဲရင်ဘဲနိုင်ငံရဲ့သစ္စာဖေါက်ဖြစ်သွားပြီလိုလို|လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘဲဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီလိုလို|သဘောမျိုးရေးသားလာပါတယ်။အခြားလူများဘာသုံးသုံးကျွန်တော့်အနေနဲ့ဝင်စွက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ကျွန်တော်သည်ပါတီစွဲကင်းတဲ့မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောလိုသည်မှာmytelပေါ်ထွက်လာသည်ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ကြားသွားသည်မှာဈေးပိုရင်တောင်မှကိုယ့်လူမျိုးဘာသာထံမှသာဝယ်ယူပါ။သူယူတဲ့အမြတ်ငွေသည်အမျိုးဘာသာအတွက်ထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်းမိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်mytelဆင်းကတ်ဝယ်ပြီးမှကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟန်းဆက်ကmecဘဲထည့်လို့ရပြီးmytelကထည့်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒုက္ခပါဘဲ။ဆိုင်ရှင်ကထည့်မရလဲဆင်းကတ်ပြန်အပ်နိုင်ကြောင်းပြောပေမယ့်လိုချင်တဲ့အတွက်ပြန်မအပ်ဘဲဝယ်ထားပြီးဟန်းဆက်ဝယ်ရန်ငွေစုရမယ်။ဟန်းဆက်၆၀၀၀၀တန်ဆိုရင်တရက်(၅၀၀)ဖြင့်(၄)လလောက်စုမယ်ဗျာ။ လိုအပ်ရင်ဝန်းသို(၁၁၁)တပ်ကကျွန်တော့်အကိုထံမှလောလောဆယ်ဟန်းဆက်အဟောင်းတစ်လုံးအကူအညီတောင်းပြီးမြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်သုံးစွဲပါမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။(ကျွန်တော်mytelနဲ့သုံးလို့ခင်မင်မှုဖျက်မယ်ဆိုလျှင်လည်းဝမ်းမြှောက်စွာလက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ)
June 13, 2018 June 13, 2018 MM Live News4 Comments on နေပြည်တော်စည်ပင်ဒုညွှန်မှူး ၂ ဦးအား အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနှင့် စွဲချက်တင်
နေပြည်တော်စည်ပင်ဒုညွှန်မှူး ၂ ဦးအား အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနှင့် စွဲချက်တင် ======================= နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ဌာနမှူး) နှစ်ဦးလုံးကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်က ၂၀၁၃ခုနှစ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၆ နဲ့ ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းက စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးများဌာနက ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ဦးမင်းလွင်စိုးနဲ့ တိရစ္ဆာန်ကုသရေးနှင့် သားသတ်ရုံများဌာနက ဌာနမှူး(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ဒေါက်တာ ခိုင်စိုးလှတို့ဟာ သားသတ်လိုင်စင် ရရှိခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ ဦးမျိုးခက်နဲ့ ဦးဘိုဘိုဟန်တို့ထံကနေ ငွေများ ရယူခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က အမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ တိုင်ကြားချက်အရ နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိ ရဲစခန်းမှာ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်က အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တရားလွှတ်တော်မှာ ဒေါက်တာခိုင်စိုးလှကို […]
မင်းကောင်မလေးနဲ့ မင်း chatting ထိုင်နေတယ်။ ရုတ်တရက် သူနဲ့ sex chat လုပ်ချင်လာတယ်။
June 13, 2018 June 13, 2018 MM Live NewsLeaveaComment on မင်းကောင်မလေးနဲ့ မင်း chatting ထိုင်နေတယ်။ ရုတ်တရက် သူနဲ့ sex chat လုပ်ချင်လာတယ်။
မင်းကောင်မလေးနဲ့ မင်း chatting ထိုင်နေတယ်။ ရုတ်တရက် သူနဲ့ sex chat လုပ်ချင်လာတယ်။ မင်း သူ့ဆီက ဖော်ချွတ်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို တောင်းတယ်။ ကောင်မလေးက မပေးဘူး ငြင်းတယ်။ မင်း ဆက်တောင်းတယ်။ ကောင်မလေးက သူ့ကို နားလည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ မင်းကလည်း မင်းကို ယုံဖို့ ပြောပြတယ်။ ကောင်မလေးက ပုံမပြရဲဘူး ထပ်ငြင်းတယ်။ မင်း ဆက်တောင်းသေးတယ်။ ကောင်မလေးက မင်းကို ခဏစောင့်ခိုင်းတယ်။ မင်း ခဏစောင့်နေလိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံ ရောက်လာ တယ်။ မင်းပျော်သွားတယ်။ မင်းဖာသာ အာသာဖြေတယ်။ မင်းကိစ္စပြီးတော့ သူ့ဓာတ်ပုံကို ပြန်ကြည့် တယ်။ မင်းရွံသွားတယ်။ တန်ဖိုးထားစရာ မကောင်းတော့ဘူး။ မသတီတော့ဘူး။ မင်း တစ်ခုခု ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တယ်။ […]
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်မြို့ လူသတ်မှုမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို
June 13, 2018 June 13, 2018 MM Live NewsLeaveaComment on မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်မြို့ လူသတ်မှုမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်မြို့ လူသတ်မှုမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က (၂၄)နာရီအတွင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၂ ၁၁.၆.၂၀၁၈ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်မြို့၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာ၊ နှင်းဆီလမ်းမပေါ်တွင် ဓားဒဏ်ရာ များဖြင့် သေဆုံးနေသူ အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးကို သေဆုံးအောင် ပြုလုပ်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က (၂၄)နာရီအတွင်း သက်သေခံပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ယင်းနေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင် ထောက်ကြန့်နယ်မြေရဲစခန်း မှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်မြို့၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာ နှင်းဆီးလမ်းမပေါ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးနေ ကြောင်း သတင်းအရ သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ (စိစစ်ဆဲ) အသက် (၂၅)နှစ်ခန့်ရှိ အမျိုးသားမှာ […]